के अनियमित महिनावारी बाँझोपनको संकेत हो ? | Vatsalya
महिनावारी महिलामा हुने एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । सामान्यतय: हरेक २८ दिनको अन्तरालमा महिनावारी हुने गर्दछ। के यसले सन्तान प्राप्त हुन सक्ने वा नसक्ने क्षमताको सूचकको रुपमा काम गर्न सक्छ ? के यसको नियमितता वा अनियमितताको आधारमा कसैलाई सन्तान प्राप्त गर्न योग्य / अयोग्यको रुपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ?
उत्तर सामान्य देखिएपनि यो विषयमा किटानका साथ केहि भन्न सकिन्न किनभने मानव शरीर आफैंमा जटिल छ । कहिले असामान्य महिनावारी भएका महिलाले गर्भधारण गर्न सफल भएका हुन्छन् भने कहिले नियमित महिनावारी हुनेमा पनि बाँझोपन देखिन सक्छ ।
महिनावारी सम्बन्धि जानुपर्ने आधारभूत कुराहरु:
महिनावारी मूलतः गर्भधारणका लागि महिलाको शरीरले आफूलाई तयार पार्ने प्रकृया हो। यसमा डिम्बाशयबाट डिम्बको निष्कासन हुन्छ र निषेचित डिम्बलाई पाठेघरमा टाँसिन र पोषणका लागि मद्दत पुर्याउन endometrium को विकास भएको हुन्छ । निषेचन हुन नसकेको खण्डमा यो महिनावारीको रुपमा शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ ।
१ -५ दिन : यस अवधिमा रक्तश्राव हुन्छ
६-१४ दिन: डिम्बको र endometrium को विकास हुन्छ
१४ दिन : डिम्बाशयबाट डिम्बको निष्काशन हुन्छ
१५-२८ दिन: गर्भनली हुँदै डिम्ब पाठेघर सम्म पुग्छ । गर्भनलीमा शुक्रकिट सँग मेल भए गर्भधारण प्रक्रिया शुरु हुन्छ अन्यथा endometrium संगै डिम्ब पनि महिनावारीको रक्तश्रावको रुपमा निस्किन्छ ।
धेरै महिलामा आजकल अनियमित महिनावारीको समस्या देखिने गरिएको छ । यसका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । तल हामीले प्रजनन् मा हानी पुर्याउन सक्ने अनियमित महिनावारीका कारण सम्बन्धि चर्चा गरेका छौं ।
क) Anovulation / एनोभुलेशन
यस अन्तर्गत ovulation अर्थ डिम्ब निष्कासन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह बिना गर्भधारण सम्भव हुँदैन ।
ख) Primary Ovarian Insufficiency (POI) / Premature Ovarian Failure (POF)
यस्तो अवस्थामा अनियमित महिनावारी हुनसक्छ वा पूर्ण रुपमा महिनावारी बन्द हुन सक्छ । Estrogen को मात्रा कम भएर हुन सक्ने यस्तो समस्यामा योनी सुख्खा हुने, यौन सम्पर्क पिडादायक हुने, निंद्रा नलाग्ने, शरीरको तापमान बढ्ने, डिप्रेसन जस्ता लक्षण देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विज्ञको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ ।
मोटोपन प्रजनन् मा असर पुर्याउने एक प्रमूख कारण हो । यसले महिनावारी पनि अनियमित बनाउँछ । अधिक मोटो हुनुमा PCOS, Thyroid पनि प्रमूख कारण हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जीवनशैली / खानपान आदिमा सुधार ल्याएर र व्यायाम, योग आदिमा ध्यान दिएर सुधार ल्याउन सकिन्छ । धेरै कम तौल भएपनि समस्या देखिन सक्छ ।
घ) Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)
PCOS एक endocrine सम्बन्धि समस्या हो । यसले सबैमा बाँझोपन ल्याउँछ भन्ने हुँदैन तर गर्भधारणमा अफ्ठ्यारो हुने गर्दछ र ८ मध्ये १ मा बाँझोपन पनि ल्याउन सक्छ । PCOS देखिएकाहरुले गर्भधारण गर्न लामो समय लिन सक्छन् वा उनीहरुमा गर्भपात को समस्या देखिन सक्छ ।
ङ) Thyroid सम्बन्धि समस्या
महिनावारी सँग सम्बन्धित यस्ता समस्या देखिए गर्भधारणका चुनौती थपिन्छन् तर सन्तान नै नहुने हुँदैन । कसै-कसैले केहि औषधि सेवन गरेर त कसैले निरन्तर प्रयास बाट पनि सन्तान प्राप्त गर्न सक्छन् ।
महिनावारी अनियमित भएकाले सन्तान प्राप्त गर्न के गर्ने ?
अनियमित महिनावारी भएका महिलाहरुले सन्तान प्राप्त गर्न आफ्नो जीवनशैली, खानपान आदिमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । तौल सन्तुलित पर्नु पर्छ र नियमित यौन सम्पर्क गरिराख्नु पर्छ । नियमित यौन सम्पर्कले (हप्तामा कम्तिमा ४ पटक सम्म) ओव्यूलेशन चक्रको बेला निषेचन हुने सम्भावना बढाउँछ जसले गर्दा सन्तान प्राप्ति को सम्भावना बढ्छ ।
नियमित महिनावारी मा पनि किन देखिन सक्छ बाँझोपन?
कहिलेकाँहि महिनावारी नियमित देखिएपनि सन्तान प्राप्तिमा चुनौती देखिन सक्छ । जस्तै:
विभिन्न कारणले गर्भनली बन्द हुन सक्छ वा कुनै घाउहरु देखिन सक्छ
नियमित महिनावारी हुँदाहुँदै पनि डिम्ब निष्कासन नभइरहेको हुन सक्छ
डिम्बको गुणस्तर राम्रो नहुन सक्छ जसले गर्भपात गराउन सक्छ
यी अवस्थामा महिनावारी नियमित भएपनि गर्भधारणमा समस्या हुन सक्छ ।
महिनावारीको गडबडीले गर्भधारणमा समस्या थपेको हुन्छ तर प्राकृतिक रुपमा गर्भ बस्नै नसक्ने हुँदैन । गर्भधारणको प्रयास २ वर्षसम्म पनि सफल भएन भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।